Jetban in press – Osho Jetban
Category: Jetban in press
jai osho jai guru dev
Posted December 3, 2018 adminLeaveacommentPosted in Jetban in press
Posted June 22, 2018 June 22, 2018 adminLeaveacommentPosted in Jetban in press
सन् १९७० को जनवरीमा हामीले ओशोलाई पटना आमन्त्रण ग¥यौँ । मैले उहा“को आध्यात्मिक सान्निध्यमा चार दिन बिताउने अवसर पाए“ । म त्यसबेला पटना युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी थिए“ । चार दिनपछि उहा“ रेलबाट जबलपुर फर्कनुभयो । रेलका सबै डब्बा चहारिसकेपछि ऊ विषादयुक्त भावमा टोलाउँथी– दुवै गालाबाट भुइँमा आ“सुका धारा बगाउँदै । उसको मुहारमा एक अनौठो […]
माधव अधिकारी सीतापाइलाका हरिशरण कार्की फुर्सद हुनासाथ नागार्जुन हिल्सस्थित ओशो तपोवन पुगिहाल्छन् । प्रिन्टर मर्मत गर्ने पेसा अपनाएका उनी व्यस्त दैनिकीबाट केही समय मिल्नेबित्तिकै तपोवन पुगेर ध्यानमा लिन हुन्छन् । ओशोभक्त स्वामी आनन्द अरूणबाट सन्यास दीक्षा लिएपछि उनले नयाँ नाम समेत पाएका छन्, स्वामी हरि चैतन्य । सन्न्यासले आफ्नो जीवन बदलिएको उनको अनुभव छ । […]
स्वामी आनन्द अरूण आज रमण महर्षिको महासमाधि दिवस हो । हुन त अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार उहाँले १४ अप्रिल १९५० दिन शरीर छोड्नु भएको हो । तर, यस वर्ष तिथि अनुसार त्यो दिन २४ अप्रिलमा परेको छ । उहाँको आश्रममा यो दिन तिथि अनुसार नै मनाउने चलन छ। विगत शताब्दीमा पैदा भएका गुरुहरूमध्ये ओशोले बडो […]
सन् १९२६ मा हिमालय पार गरेर तिब्बतबाट सय वर्षको उमेरमा परमात्माबोध भएका एक साधु नेपाल पसे। उनको भनाई थियो– नेपाल तपोभूमि हो। त्यसैले यहाँ संसारभरका व्यक्ति खोज गर्न आइरहेका छन्, भविष्यमा पनि आउनेछन्। ती व्यक्ति शिवपुुरी डाँडामा धेरै वर्ष तपस्यामा बसेको हुनाले उनलाई शिवपुरीबाबा भनेर बोलाउन थालियो। तर, उहाँको संन्यास नाम भने गाविन्दानन्द भारती […]
OSHO TAPOBAN is pleased to announce the opening of its new Arogya Mandir and Spa,aholistic approach to health care and Ayurveda. Come and visit us for various services offered by our brand new facility at Osho Tapoban. Massage Ayurvedic/Himalayan Herbal Deep Tissue Massage Hot Stone Massage Swedish Massage Thai Massage Shiatsu Massage Arogya […]